UMophie usungula ityala lebhetri kwiGalaxy Note 9 | I-Androidsis
UIgnacio Sala | | Ibhetri, Izixhobo ze-Android, Samsung
Kumaxesha okugqibela, ayingabo bonke abavelisi ababhejayo ekwandiseni ubungakanani beebhetri ukusuka kwiiterminal zayo. Ngelixa uninzi lweetheminali eziphezulu ze-Android, ukuba ziye zandisa umthamo webhetri yazo, iApple ithatha indlela eyahlukileyo, egxile ekuphuculeni ukusetyenziswa kwamandla kweeprosesa zayo kunye nokugcina, ngokulinganayo, amandla afanayo.
El I-Samsung Galaxy Note 9 Yanikezelwa ngokusesikweni ngo-Agasti ophelileyo, ngeendlela ezintsha ezenza ukuba kucetyiswe ukuba kuhlaziywe kwisizukulwana esidlulileyo. Inqaku 9 landise amandla ebhetri ukuya kwi-4.000 mAh, ukusuka kwi-3.300 mAh ebonelelwa sisizukulwana esidlulileyo. Nge-4.000 mAh esinayo ibhetri eyaneleyo ukuba ihlale yonke imini. Kodwa ngeentsuku ezithile, isenokungonelisi.
Ngezo mihla xa sisebenzisa le modeli kakhulu, umvelisi uMophie usandula ukumilisela ityala kunye nebhetri edibeneyo esivumela ukuba siphinde sihlaziye isixhobo ngendlela elula kakhulu kwaye elula ukuba siyithelekisa nebhanki yamandla yemveli. Ukuba sithetha ngabavelisi bamatyala ebhetri, okanye iibhanki zombane ngokubanzi, omnye wabenzi abaphambili kwimarike nguMophie.
La I-Mophie Juice Pack, yimeko enebhetri eyi-2.525 mAh edityanisiweyo, ethi xa idityaniswe nesiphelo, isinike iiyure ezingama-38 zokuzimela. Ukongeza, isinika ukhuseleko olongezelelekileyo malunga nokuwa okunokubakho kwimiphetho ekhusela ngokupheleleyo i-terminal. Ngasemva kweli tyala, njengazo zonke iiMophie Juice Packs, sifumana uthotho lwee-LEDs kunye neqhosha elithi xa licinezelwe, lisibonise inqanaba lebhetri letyala.
Inkqubo yokutshaja yeli tyala iyafana naleyo yokudibanisa ifowuni, ngokungeniswa, ukuze uyihlawulise, kufuneka nje yibeke kwitshaja engenazingcingo . Ixabiso lale meko ngama-99,95 euros kwaye ifumaneka kuphela emnyama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » UMophie uvula ityala lebhetri kwiGalaxy Note 9